नेपाल आज | परिवारलाई डेटिङमा जान्छु भनेर को जान्छः मनिता ढुंगेल
अन्तरवार्ता मनोरञ्जन भिडियो
परिवारलाई डेटिङमा जान्छु भनेर को जान्छः मनिता ढुंगेल
आइतबार, २५ साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
कार्यक्रम रेड चिल्ली शोको तेस्रो श्रृङ्खलामा अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुभएकी पूर्व मोडल तथा महिला उद्धमी मनिता ढुंगेल र प्रस्तोता विजय ढुंगेलसँगको छोटो मिठो कुराकानीमा उनले आफ्नो जिवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि आएका चुनौतीहरुको बारेमा बताइन् । परिवारसँग समय समयमा बसाईंसराइ गर्नुपर्दा सामाजिक वातावरणमा घुलमिल हुन गाह्रो भएको उनले बताइन् ।
तपाईँले करियर के चुज गर्छु भनेर कुन विषय लिएर पढ्नुभयो ?
मेरो करियर एकदमै कनफ्युजिङ थियो । हरेक क्लास फेरिएसँगै सपना पनि फेरिँदै गएको थियो । सुरुमा मलाई वकिल बन्ने इच्छा थियो र म पछि मोडलिङतर्फ आर्कषित भए । मोडलिङमा लागिसकेपछि पनि मलाई फेरि फ्यासन डिजाईनिङ सिक्न मनलाग्यो तर मैले र्कोस पुरा गरिन । त्यसपसछि मलाई एयरहोस्टेस् को पनि अध्ययन गर्न मन लाग्यो तर मेैले त्यसलाई थप निरन्तरता दिइँन । ग्ल्यामर क्षेत्रको लत लागेपछि छोड्न गाह्रो हुने रहेछ त्यसकारण मैले मोडल र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सुरु गरेँ ।
तपाईको पहिलो मेकअपमा के के प्रयोग गर्नुभएको थियो ?
मेरो स्किन कलर गहुँ गोरो थियो । मेरो साथीहरु भने निकै गोरी थिए । मलाई पनि गोरी हुन मन लाग्थ्यो । पहिला अहिलेको जस्तो थुप्रै मेकअपको सामान थिएन तर म मम्मीको फेयरनेस क्रिम चोरेर कागजमा लुकाएर लाउने गर्थे । साथसाथै मम्मीको लिपस्टिक पनि चोरेर घरबाट केही अगाडी पुगेपछि लगाउँथे ।मेरोे पहिलो मेकअप त्यतिबेलाको लागि राम्रो नै भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ ।
लभ लेटरहरु कत्तिको लेख्ने र पाउने गर्नुहुन्थ्यो ?
पहिला प्रविधिको विकास भएको थिएन र केटा र केटी सँगै बस्नु भनेको एकदमै अनौठो कुरा थियो । तर टिनेजको बेलामा प्रविधिको विकास नभएपनि लेटरहरु म पनि लेख्ने गर्थेँ र अरुबाट पनि मैले पाउँथे ।
पुरै अन्तरर्वाता हेर्नको लागि तलको सामाग्री हेर्न नभुल्नुहोला ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा जारी